Ndepụta nke Mobile App na Mobile Web nyiwe N'ihi na gị Business
Ọ na-atụkarị m anya na ọnụ ọgụgụ saịtị ndị a na-anaghị ahụ anya na ekwentị mkpanaaka - gụnyere ndị nkwusa buru oke ibu. Nchọpụta Google egosila na 50% nke ndị mmadụ ga-ahapụ weebụsaịtị ma ọ bụrụ na ọ bụghị mobile-friendly. Ọ bụghị naanị ohere ịnweta ụfọdụ ndị na - agụ akwụkwọ, ịhazi saịtị gị maka iji ekwentị nwere ike ịkwalite ahụmịhe onye ọrụ gị kemgbe ị mara na folks bụ ugbu a mobile! Site na ọtụtụ nha ihu na sistemụ arụmọrụ, na-achọgharị maka mkpanaka abụghị otu achicha ọzọ.
Ndị a bụ Ngwaọrụ iji mee ka saịtị gị dị njikere.
Ngosipụta - Appifier na-ewulite ngwanrọ iOS, Android, na Windows ngwa n'okpuru 60 sekọnd.
Inlọ akwụkwọ - Onye na - arụ ọrụ ngwa maka ndị nwe obere azụmaahịa na - enweghị ọrụ.
Apapu.io - Naanị igwe ojii na-eweta ikpo okwu nwere ngwa ọrụ mmepe anya, yana ọrụ nkwado ndabere
NgwunyeGiyser - AppsGeyser bụ ọrụ na-enweghị ọrụ nke na-agbanwe ọdịnaya gị na ngwa ma mee gị ego.
Appy Pie - ígwé ojii nke dabeere na DIY Mobile App Builder ma ọ bụ App Creation Software nke na-enye ndị ọrụ ohere enweghị mmemme mmemme, iji mepụta ngwa maka Windows 8 Phone, Android & iPhone ngwa maka mobiles na smartphones; ma bipụta ya na Google Play & iTunes.
megharịrị - a dị mfe, nke nkiti ngwá ọrụ na-akpaghị aka na-atọghata gị ọdịnaya a mobile kachasị saịtị na ụfọdụ bụ isi customization.
Bizness ngwa ọdịnala - Fastzọ dị ọsọ na mfe maka azụmahịa ọ bụla iji mepụta ngwa iPhone maka naanị $ 39 kwa ọnwa!
Ihe ọkụ - Ike Platform Onye Nwepụta Ngwa na Whitelabeling.
Codeka bụ onye dọrọ-na-dobe na-ewu ihe maka ịmepụta ngwa ngwa ngwa-ngwa na weebụsaịtị.
Como - Mepụta ngwa nke aka gi maka ahia obula.
DudaMobile - site na ngwa ọrụ niile m nwalere, nke a nwere ike ịbụ nke kachasị mfe iji ma mejuputa! Ọkachamara ha nwere ike inye gị ohere ịnweta ebe nrụọrụ mkpanaka na nkeji ole na ole. Ha na-enye gị ohere iwepu mgbasa ozi ha niile ma jiri ngalaba ahaziri maka ego ole na ole.
Ikwerre - onye na-ewu ewu na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ na-adị mfe maka ụlọ ọrụ iji soro ndị ahịa ha na-arụ ọrụ na saịtị saịtị.
Mobicanvas - CMS n'efu, dọrọ na dobe mobile CMS na ijikọ wijetị na akụkọ dị mkpa.
Mobue - Ndị nkwusa na ndị na-emepụta weebụ gburugburu ụwa na-eji Mobify Studio iji mepụta ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka mara mma. Mobify ebipụtala saịtị mkpanaka maka ọtụtụ usoro njikwa ọdịnaya, gụnyere WordPress, Drupal na ndị ọzọ. Mobify nwekwara igwe ecommerce.
Mobile roadie - wuru ọtụtụ narị ngwa ngwa maka ndị agha, ndị egwuregwu na ndị ọchụnta ego. Usoro njikwa ọdịnaya ha jikọtara ọnụ ma nwee ọkaibe.
Mobdis - Mobile website na-ewu ụlọ. Ugbu a ị nwere ike ịgbasa n'ime ahịa ahịa site na iji ngwa ọrụ anyị nke na-ahapụ gị ịmepụta saịtị mkpanaka dị mfe.
mobiSiteGalore - Mee gị onwe gị na ebe nrụọrụ weebụ nke MobileNke a nke juputara na smart phones na amara obuna na obere ekwentị
Mofuo - bụ sistemụ njikwa ọdịnaya agịga nke nwekwara ike iwekota ọnọdụ ụlọ ahịa mpaghara ala. Mee, mwepụta, tụọ, jikota ma kwalite webusaiti gị.
Moovweb - Iji ngwa ndị nrụpụta n'efu na ntakịrị koodu Tritium nke njedebe, websaịtị ọ bụla dị ugbu a nwere ike gbanwee, n'oge dị adị, gaa na ahụmịhe mkpanaka dị ukwuu. A na-akpọ ụzọ a ka nzipu nziza, ihe ana-abanye na ntanetị na ntanetị maka imewe weebụ.
Ndị na -akwado ekwentị m - Ngwa bara uru ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka maka onye ọ bụla, na-abụghị uru na obere azụmaahịa site na ụlọ ọrụ anyị na-eduga ngwa ngwa Mee N'onwe Gị.
NetObjects Mozis bụ ngwa dị n'ịntanetị maka mkpokọta mkpokọta weebụ nke na-eji eserese eserese iji nye ahụmịhe onye ọrụ na-enweghị nghọta na enweghị atụ nke iji. Ekere Mosaic ka ọ bụrụ nke dị mfe, ma dịkwa ike na-adịghị agwụ agwụ, iji nyere gị aka iwulite weebụsaịtị mkpanaka dị irè na obere nkeji.
Peeji nke bụ nzukọ nke ndị mgbasa ozi lekwasịrị anya na inye ikike azụmaahịa pere mpe (VSB) site na iji ngwaọrụ mkpanaka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya tolite ma nwee ọganiihu.
Snappi na-ewuli ngwangwa iPad, iphone na gam akporo ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa bu ndi ulo oru choro ma choghi mmepe.
Ngwa AppBuilder - Reinvent your business with ngwa. Mepụta ngwa na ngwa gọọmentị nke ndị ọrụ, ndị mmekọ na ndị ahịa na-atọ ụtọ.
Nkuzi - Chepụta ngwa nke ala gị ma jikwaa data gị na-enweghị nzuzo, wee mee ya ozugbo na ngwaọrụ gị.
Tags: ngwaonye wuru ngwangwaonye arụrụalangwaachịchabizness ngwaọkụ ọkụcodikadị kamobile ngwamobile ngwa na-ewu ụlọmobile ngwa enginemobile ngwa na-eme ihemobile enyi na enyinjikarịcha ekwentịsaịtị mkpanaakamovwebndị m mobilesnappionye na-ewu ụlọ
Emehie 7 You'll ga-eme na Arụ Ọrụ Marketingzụ ahịa
Septemba 10, 2011 na 2:05 ehihie
Maka 'ọkpụkpụ efu' mana ọ dị mfe iji, WinkSite na-amasị m nke m na-eji maka ibe mmalite m na ngwaọrụ mkpanaka m.
Saịtị ibe ya http://Delivr.com Ọ dị mma maka ịmepụta koodu QR & nyocha ha.
Septemba 10, 2011 na 3:05 ehihie
Winksite pụtara ka ọ bụ saịtị mkpanaka karịa ngwa iji nyere aka ịtụgharị ma ọ bụ jikọta saịtị gị maka ojiji mkpanaka… echere m ebe ahụ?
Sep 11, 2011 na 12: 33 AM
Mba, WinkSite na-emepụta saịtị na-enyere gị aka ịnyagharịa (ugbua) ọdịnaya enyi na enyi mkpanaka (yana ndepụta RSS)
Septemba 12, 2011 na 9:57 ehihie
Ihe dị mma. Ezigbo ngwá ọrụ Doug.
Nke a bụ oge nke abụọ m na-ahụ FiddleFly akpọtụrụ n'ime izu gara aga ma ọ bụ karịa. Agbalịrị m ole na ole n'ime ngwaọrụ ndị a (Amaghịdị na enwere ọtụtụ) yana naanị ịkọrọ gị na ndị na-agụ akwụkwọ gị, FiddleFly ROCKS !! Enwere m ike iwu saịtị ahaziri ahaziri n'ime nkeji. Ọ dị mma, yabụ tupu m amalite ụda dị ka m na-arụ ọrụ maka ụmụ okorobịa ndị a (Ọ nwere ike ịbụ n'oge) M na-atụ aro ka ndị na-agụ gị gbalịa ọtụtụ ngwọta tupu ịme mkpebi ikpeazụ.
Daalụ ọzọ maka nnukwu ọkwa
Septemba 12, 2011 na 9:58 ehihie
Sep 13, 2011 na 3: 35 AM
kedu maka http://mobdis.com? html5 saịtị mkpanaka na onye nrụpụta mgbasa ozi.
Sep 7, 2013 na 10: 44 AM
Gbakwunyere, ndo maka igbu oge ahụ!
Sep 13, 2011 na 8: 30 AM
Ejila m ngwaọrụ abụọ ndị a n'ezie ma nwee ike melite ntakịrị ntakịrị aha online na usoro. N'ezie ọ bụghị ihe dị mfe mana ọ nwere ike ime na nke ahụ bụ ihe niile dị mkpa.
Septemba 2, 2014 na 4:35 ehihie
Ị ga-ewere moovweb ka ọ bụrụ nhọrọ ga-adaba na ndepụta gị, biko tinyekwuo ma ọ bụrụ na ịmee.